Ulwazi olugqithisileyo kunye ne-infographics | Martech Zone
Ulwazi olugqithisileyo kunye ne-infographics
NgoLwesithathu, Aprili 23, 2014 Douglas Karr
Yonke imihla sijonga izilumkiso zethu ukusuka I-Meltwater, okanye uxhase, kwaye uphonononge uninzi lwee-infographics ezinxulumene nentengiso kwiwebhu. Veki nganye sikhetha ukungashicileli amakhulu infographics, nangona kunjalo. Siziphuhlisa ngokwethu ii-infographics kwaye ayisiyiyo into yokuba sizii-snobs… kukuba nje siqonde ukuba yintoni eyenza umsebenzi we-infographic nokuba yintoni.
I-infographic eyilwe kakuhle ngaphandle ulwazi olugqithisiweyo inezi zinto zilandelayo:
Ibali eliNwabisayo -Konke, kufanele ukuba kubekho umxholo othile ekuhlanganisweni kwedatha kunye nemizobo. (Jonga Thintela uqhekezo lwasekhaya eyasungulwa ngeHalloween)
Ukuxhasa uPhando -Ukuqinisekisa ibali, kubalulekile ukuba i-infographics ibhekise kuphando lomntu wesithathu. (Jonga Uvavanyo lokufumana amanqaku)
Isiphelo - intshayelelo ihlala ilungile, kodwa isiphetho kufuneka. Uza kumchaphazela njani umntu ngaphandle kokuqhuba idatha kunye nebali ukuya kwisiphelo? (Jonga Isoftware yoLawulo lweProposal ikhulisa njani ishishini)
Uchonga - ungubani kwaye kutheni unegunya kwesi sihloko? Uya kumangaliswa kukuba zingaphi i-infographics endizijongayo ezilungileyo… kodwa ziswele naziphi na iindlela zokuchonga umthombo. (Jonga Ulwakha njani iZiko ledatha)
Ukutsala umnxeba -Ndisandula ukugxeka inkampani ngokuswela kwabo i-CTA kwi-infographic yabo. Bathe abafuni kuza ngapha nangapha Ukuthengisa. Khange nditsho ukuba ndiyazithengisa… ndibaxelele nje ukuba mabaxelele abatyeleli ukuba mabenze ntoni emva koko. (Jonga Ityala leShishini kuLawulo lweeAsethi zeDijithali)
Uninzi kakhulu lwe-infographics lukhangela nje isixa sezibalo ezinomtsalane kuyilo oluhle. Iziphumo zezi ulwazi olugqithisiweyo. Abantu bayalahleka kwaye badideke yidatha endaweni ye-infographic yokufundisa umfundi ukuba yintoni injongo emva kwe-infographic.
Kukho ukungafani, kunjalo, njenge ehlekisayo infographics (jonga eyethu Arhente Uthando noMtshato kwaye Kutheni abantu bengakulandeli kwi-Twitter) okanye Inyathelo nenyathelo infographics (jonga Amanyathelo ali-10 kuLawulo lweNtlekele).
tags: kwi-infographicimizekelo ye-infographiculwazi olugqithisiweyo
Imephu yeHlabathi liphela ye-E-Commerce Boom